သွားကျန်းမာရေး – Page3– My Doctor
Orthodontic Treatment Part 4
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ခေတ်စားလာသော အလှအပဆိုင်ရာ သွားနှင့်ခံတွင်းကုသမှု (သို့မဟုတ်) သွားညှိကုသမှု အကြောင်း တစေ့တစောင်း (အပိုင်း-၄) သွားညှိကုသမှုမှာ Treatment Objective (ကုသမှုရည်ရွယ်ချက်) သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ 1- Esthetic (အလှအပ) 2- Function (လုပ်ဆောင်ချက်) 3- Stability (တည်ငြိမ်မှု)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ခေတ်စားလာသော အလှအပဆိုင်ရာ သွားနှင့်ခံတွင်းကုသမှု (သို့မဟုတ်) သွားညှိကုသမှု အကြောင်း တစေ့တစောင်း (အပိုင်း-၃) သွားညှိမကုသဘဲထားရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်လားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သွားတွေမှာ နံပါတ်တစ် ပြဿနာကတော့ အလှအပရေးရာပါ။ လူတွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တစ်ပါးသူနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံနေရတာဖြစ်ပြီး အဲ့လိုပြောဆိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်သွားမညီညာမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
Orthodontic Treatment (Part 2)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ခေတ်စားလာသော အလှအပဆိုင်ရာ သွားနှင့်ခံတွင်းကုသမှု (သို့မဟုတ်) သွားညှိကုသမှု အကြောင်း တစေ့တစောင်း (အပိုင်း-၂) သွားညှိကုသရင် ဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကြာတတ်ပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ Treatment plan ပ်ါမူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ သွားနှုတ်စရာလိုမလိုပေါ်မူတည်ပြီးသော်လည်းကောင်း၊ သွားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးသော်လည်းကောင်း၊ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးသော်လည်းကောင်း၊ ရက်ချိန်းမှန်မမှန်ပေါ်မူတည်ပြီးသော်လည်းကောင်း
အချဉ်စားရင်သွားခိုင်သလား "သွားဘယ်ကောင်းမလဲ အချဉ်ကြောက်တာကိုး" "အချဉ်စားရင် သွားခိုင်တယ် များများစား" ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကြားဖူးနားဝ ရှိပြီးသားစကားတွေပါ။ ဒါဆို အချဉ်ဟာ သွားအတွက်ကောင်းသလား။ ကောင်းတယ်လို့ ပြောရင်အပြည့်မမှန်နိုင်သလို မကောင်းဘူးလို့ ပြောရင်လည်းအပြည့်မမှန်ပါဘူး။ တကယ်က သင့်တင့်မျှတစွာ စားသုံးဖို့လိုအပ်တာပါ။ အချဉ်ဓာတ် (Vitamin C) ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့
"ဒီအရွယ်ထိသွားကြိတ်နေတုန်းလား?" သွားကြိတ်တယ်ဆိုတာ မရည်ရွယ်ပါဘဲနဲအိပ်နေရင်းဖြစ်ဖြစ် နိုးနေစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားအချင်းချင်းပွတ်နေတာ၊ အရှေ့အနောက်ကြိတ်နေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ တော်တော်များများမှာသွားကြိတ်ခြင်းပြသနာရှိတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ဝက်လောက်က သွားကြိတ်တတ်ကြတယ်လို့တောင်ဆိုပါတယ်။ မိမိအိပ်နေချိန်မှာသွားကြိတ်မိမှန်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? နိုးလာတဲ့အချိန်သွားကိုက်သလိုခံစားရတာမျိုး မနက်စာစားတဲ့အချိန်မှာ မေးရိုးနဲ့ ပါးတွေညောင်းနေတာ၊ တောင့်နေတာမျိုး နေ့လည်မှာခေါင်းကိုက်တာမျိုး အစားစားတဲ့ ၊ သန်းဝေတဲ့ အချိန်မှာမေးရိုးနာတာ၊ ညောင်းတာမျိုး သွားဖုံးတွေမကြာခဏယောင်တာမျိူး တွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ခေတ်စားလာသော အလှအပဆိုင်ရာ သွားနှင့်ခံတွင်းကုသမှု (သို့မဟုတ်) သွားညှိကုသမှု အကြောင်း တစေ့တစောင်း (အပိုင်း-၂) သွားညှိကုသရင် ဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ? ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကြာတတ်ပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ Treatment plan ပ်ါမူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ သွားနှုတ်စရာလိုမလိုပေါ်မူတည်ပြီးသော်လည်းကောင်း၊ သွားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးသော်လည်းကောင်း၊ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးသော်လည်းကောင်း၊ ရက်ချိန်းမှန်မမှန်ပေါ်မူတည်ပြီးသော်လည်းကောင်း
"ခံတွင်းရနံ့ဆိုးတွေကိုမေ့ပစ်လိုက်စေမယ့် နည်းလမ်း" ခံတွင်းရနံ့ဆိုးတွေဟာ သင့်ကို အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်နေမ်းဆိုရင် ဒီနည်းလမ်း ကိုဖတ်ထားလိုက်ပါ။ ၁)ခံတွင်းသန့်ရှငိးအောင်ထားပါ။ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းအဓိကက သွားနှင့်ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေးအားနည်းလို့ပါ။ သွားပုံမှန်တိုက်တဲ့အပြင်သွားကြားသန့်ရှင်းကြိုး( Dental Floss) လေးတွေ နဲ့စားပြီးတိုင်း သန့်ရှင်းသင့်ပါတယ်။ အစားစားပြီးတိုင်းသွားတိုက်ပေးပါ။ အစားစားပြီးတိုင်းပလုတ်ကျင်းပေးပါ။ ပိုးသတ်ဆေးပါသောဆေးရည်( Antiseptic solution) Listerine
Orthodontic Treatment Part 1
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ခေတ်စားလာသော အလှအပဆိုင်ရာ သွားနှင့်ခံတွင်းကုသမှု (သို့မဟုတ်) သွားညှိကုသမှု အကြောင်း တစေ့တစောင်း (အပိုင်း-၁) သွားညှိကုသမှုဆိုတာ ဘာလဲ? သွားပြင်တယ် သွားထ်ိန်းစက်တပ်တယ် လို့အများခေါ်နေကြတဲ့ သွားညှိကုသမှု (Orthodontics Treatment) ဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သွားအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ သွားကျဲခြင်း၊ သွားထပ်ခြင်း၊ သွားခေါခြင်း၊ သွားဖုံးမောက်ခြင်း၊
ခံတွင်းရနံ့ဆိုးစေတဲ့ အချက် ( ၁၀) ချက် ကျွန်မတို့ လူအချင်းချင်း ပြောဆို ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ခံတွင်းရနံ့ဆိုးနေမယ်ဆိုရင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကျဆင်းစေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိူရင်တော့ ဒီခံတွင်းရနံ့ဆိုးတာဟာ ကျန်းမာရေးပြသနာ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခံတွင်းရနံ့ဆိုးစေတဲ့ အချက် ( ၁၀) ချက်ကို ကြည့်ကြရအောင်လား။ ၁)
အဖြစ်များသော ဆိုးဝါးသည့် မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် နှုတ်ခမ်းကွဲ အာခေါင်ကွဲရောဂါ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်ရောဂါများတွင် လူသိများပြီး အဖြစ်များသည့်ရောဂါမှာ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲရောဂါ ဖြစ်ပါသည်။ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲရောဂါသည် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ အသက်(၃၅)နှစ်အထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှမွေးသော ကလေးများတွင်လည်း တွေ့ရတတ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ပထမ(၃)လတွင်